बडीगाड-६ छिसफाँटमा ट्याक्टरको ठक्करले ५२ वर्षिय केसीको घटनास्थलमै मृत्यु ! – ebaglung.com
बडीगाड-६ छिसफाँटमा ट्याक्टरको ठक्करले ५२ वर्षिय केसीको घटनास्थलमै मृत्यु !
२०७५ असार ११, सोमबार १४:२५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
दिनेश शर्मा, बडीगाड २०७५ असार ११ । बडीगाड गाउपालिका ६ छिसफाँटमा करीब आधा घण्टा अगाडी ट्याक्टरले ठक्कर दिएर एक जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ । बडीगाड खोलाबाट एक सामुदायिक भवनको लागि गिट्टी बालुवा लिएर वडा नं ७ गैरागाउँ जाँदै गरेको लु ३ च ६७७५ को ट्याक्टरले मकै खेतमा काम गरिरहेका छिसफाँटकै अन्दाजी ५२ वर्षका मकरबहादुर केसीलाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटना पश्चात ट्याक्टर चालक करीब २२ वर्षको सुवास भनेर चिनिने मैते कामी ईलाका प्रहरी कार्यालय भिङगिठेमा गएर घटनाको जानकारी दिएका थिए । आक्रोशित स्थानीयहरुले ट्याक्टर तोडफोड गरेका छन् । घटनास्थलमा बुर्तिवाङ ईकाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ओमप्रकाश यादवले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
मृतकको शवलाई पोष्टमार्टमको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लैजाने तयारी भैरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनास्थलमा बडीगाड गाउपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिँह पाईजा सहित स्थानीय जनप्रतिधीहरुको समेत आईपुगेको अवस्था छ ।
चालक र ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना स्थलमा मृतकका परिवारको बिचल्ली छ ।
बर्षातमा दारेगौँडा सडकको नाली पुरिएर भलबाढी खारबजार पस्ने स्थानीयबासीमा चिन्ता !
डेविट घर्तीको उपचारका लागि दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुबाट आर्थिक सहयोग !